Ụgbọ elu ụgbọ elu Sheremetyevo Moscow na Qatar Airways ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ụgbọ elu Sheremetyevo Moscow na Qatar Airways ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụgbọ elu ụgbọ elu Sheremetyevo Moscow na Qatar Airways ugbu a.
Site na netwọkụ Qatar Airways na-eto eto, ụgbọ elu ahụ nwere ike ịnye ndị njem si Sheremetyevo njikọ enweghị nkebi gaa na ebe ndị a ma ama na Eshia, Africa, Middle East na America, yana ebe anwụ na-acha dị ka Maldives, Seychelles na Zanzibar site na ọdụ ụgbọ elu Kachasị Mma n'ụwa 2021, Hamad International Airport (HIA).
Qatar Airways ebufela ọrụ ya na Moscow site na ọdụ ụgbọ elu Domodedovo gaa ọdụ ụgbọ elu International Sheremetyevo.
Ntugharị na ọdụ ụgbọ elu Sheremetyevo na-ahụ mpụta mbụ nke Qatar Airways 'QSuite na ụzọ.
Qatar Airways na-aga n'ihu na-ewughachi netwọkụ ya, nke dị ugbu a karịa ebe 140.
Ụgbọ elu mbụ Qatar Airways na Sheremetyevo International Airport (SVO) rutere na Ọktọba 31, 2021. Ụgbọ elu ahụ ebufela ọrụ ya na Moscow site na ọdụ ụgbọ elu Domodedovo gaa na Moscow. Ọdụ ụgbọ elu International Sheremetyevo (SVO) na ugbu a na-arụ ọrụ ya multi-award na-emeri Qsuite na Business Class na ụzọ.
QSuite bụ ụlọ ọrụ nke mbụ nwere akwa abụọ na klas azụmahịa, na-egosipụta ogwe nzuzo nke na-apụ apụ, na-ekwe ka ndị njem nọ n'oche dị nso mepụta ọnụ ụlọ nke onwe ha, ụdị mbụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Qatar Airways Onye isi otu, Onye isi ala Mazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “Dịka Qsuite na-eme mpụta mbụ na ụzọ Moscow anyị, ndị njem nwere ike ịtụ anya njem agaghị echefu echefu na Klas Azụmahịa Kachasị Mma n'ụwa, n'ọtụtụ ebe.
“Site na netwọkụ anyị na-eto eto, anyị nwere ike ịnye ndị njem si Sheremetyevo Njikọ na-enweghị nkebi na ebe ndị ama ama na Eshia, Africa, Middle East na America, yana ebe anwụ na-acha dị ka Maldives, Seychelles na Zanzibar site na ọdụ ụgbọ elu Kachasị Mma n'ụwa 2021', Hamad International Airport (HIA).
Mikhail Vasilenko, Director General nke JSC Ọdụ ụgbọ elu nke Sheremetyevo International Airport, kwuru, sị: “Sheremetyevo International Airport na-anabata nke ọma Qatar Airways, na anyị ji kpọrọ ihe karịsịa ọkwa kachasị elu nke ọrụ na ile ọbịa nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-enye ndị ahịa ya. Ndị njem ga-enwe ekele maka ụzọ ọhụrụ a si Moscow gaa Doha na ohere iji gaa ihe karịrị ebe 140 dị ịrịba ama gburugburu ụwa. N'aka nke ya, Sheremetyevo International Airport dị njikere inye ndị njem Qatar Airways ihe eji enyere ndụ aka nke ọma, ọrụ ọkwa ụwa na ọkwa Skytrax 5-kpakpando, yana ụdị nlekọta ndị ahịa kacha mma n'etiti ọdụ ụgbọ elu Europe. "
Qatar Airways na-aga n'ihu na-ewughachi netwọkụ ya, nke dị ugbu a karịa ebe 140. Site na Ọktọba 6, Russia abanyela na ndepụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka ịga leta Qatar ka ndị ọrụ ahụike Qatar nabatara ọgwụ mgbochi Sputnik V.